Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. company info
Home > ကိုယ်တို့အကြောင်း
Botou youjian သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ co ။ , LTD မှ။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှု, installation နဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအမှု Coronal တွင်တည်ရှိသည်မြို့, hebei ပြည်နယ်, အ beijing-ရှန်ဟိုင်းရထားလမ်း, beijing-ရှန်ဟိုင်းက high-speed နဲ့ 104 အမျိုးသားရေးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးအနီးအရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီ 106 ပြည်နယ်လမ်းနှင့်အနောက်ကြောကျခဲ botou "သစ်တော်သီး၏ဇာတိမြို့" ၏ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ် အဝါရောင်မြန်နှုန်းမြင့်, ပထဝီအနေအထားထက်သာလွန်သည်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွန်အဆင်ပြေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပထမဦးဆုံးအရညျအသှေး၏အခွခေံမှလိုက်နာစောင့်ထိန်းအသုံးပြုသူများပထမဦးဆုံးအခုပြည်တွင်းတန်းမြင့်, အရည်အသွေးမြင့်မားမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံ, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမျိုးသားရေးထိပ်တန်း Xu အတွက်ထုတ်လုပ်မှု volume ထဲမှာနေထိုင်ကြသည်။ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များမှာ: အထည်အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း, တစ်ခုတည်း filter ကို, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းနှင့် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်စိုစွတ်သောမြေမှုန့်စုဆောင်း, ဖုန်မှုန့် remover, အစစ်ထုတ်သည့်အရာတစ်ခုဖုန်မှုန့်စုဆောင်း, ဆေးထိုးစက်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးနည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အခြားမျိုး, ဖုန်မှုန့်အိတ်, ဖုန်မှုန့်အရိုးစု , လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်, ဥတုလမ်းခွဲနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်သတ္တုဗေဒ, လျှပ်စစ်ပါဝါ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်, etc ကုမ္ပဏီအမြဲတမ်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ဒဿန, သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနယူနစ်နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်နှင့်အဓိကရန်လိုက်နာစောင့်ထိန်း ဒီဇိုင်းဌာန, ထုတ်ကုန်များတွင်ကောင်းစွာ 30 ကျော်ပြည်နယ်များနှင့်မြို့ကြီးများရောင်းချ, အကြီးစားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းပညာနှင့်ထုတ်ကုန်၏ 30 အများအပြားအမျိုးမျိုး, 20 ကျော်စီမံကိန်းများတီထွင်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, အိန္ဒိယတင်ပို့ထားပြီး ဗီယက်နမ်နှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများအသုံးပြုသူများနှင့်ဒီဇိုင်းယူနစ်၏ကျယ်ပြန့်ထုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုသူတို့တွင် "သွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို" နှင့် "မြင့်သောဗို့အား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု" ပထမဦးဆုံးပြည်နယ်နှင့်အမျိုးသားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဗျူရိုကအတည်ပြု, နှင့်ပြည်နယ်နှင့်အဆင့်မြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆုအနိုင်ရခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုကိုစတင်အမှတ်အဖြစ်ဤယူနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အဆင့်မြင့်နည်းပညာအဆင့်, ထုတ်ကုန်များအရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ကောင်းသောဂုဏ်သတင်း၏အားသာချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်မှန်ကန်သောသိပ္ပံဆိုင်ရာအလားအလာတည်ထောင်ရန်, အဆက်မပြတ်ကုမ္ပဏီ၏ခြုံငုံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သစ်တစ်ခုအဆင့်အထိကုမ္ပဏီတွန်း။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ယင်းကုမ္ပဏီသိပ္ပံနည်းကျသုတေသန, ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများပေါင်းစပ်ဖို့လိုက်နာစောင့်ထိန်းခြင်း, အသစ်သောယန္တရားအသစ်အတှေးအချေါနဲ့နည်းပညာအသစ်နှင့်အတူစျေးကွက်ကြာနှင့်ထူးခြားပြောင်မြောက်သောရလဒ်များကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီဘဝနိုင်စွမ်း၏လူတန်းစားပေါင်းစုံကနေလူမှုရေးနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆက်လက်နှင့်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေသူငယ်ချင်းအဖြစ်အမြဲအဘို့, တစ်ဦးသဟဇာတလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆောက်လုပ်ရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထောကျပံ့များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ကြလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်လိမ့်မယ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတောက်ပမနက်ဖြန်ကွိုးစားကွ! လုပ်ငန်းသဘောတရား: အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းပေမယ့်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး!
Air Clean Equipment Parts , Other Air Clean Equipments
ထုတ်ကုန် / ဝန်ဆောင်မှု:
ဖုန်မှုန့် Collections , စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings , ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , Desulfurization ကောက်ခံရေး , filter စာနယ်ဇင်း
မြို့တော် (သန်းကိုအမေရိကန် $):
FAMI-QS , GB , ISO9001 , ISO9002
Siying of botou city province development zone, Cangzhou, Hebei, China
နှစ်ပတ်လည်အရောင်း Volume ကို (သန်းကိုအမေရိကန် $):
နှစ်စဉ်အရစ်ကျ Volume ကို (သန်းကိုအမေရိကန် $):
သွင်းကုန် & ပို့ကုန် Mode ကို:
QC န်ထမ်းများ၏အမှတ် :
ပေး OEM န်ဆောင်မှုများ :
စက်ရုံ Size ကို (Sq.meters) :
Shiying industrial zone, botou city, hebei province, China
လိပ်စာ:Siying of Botou City Province Development Zone, Cangzhou, Hebei
Related Products List: ဖုန်မှုန့် Collections , စက်မှုဖုန်ကောက်ခံရေး , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings , ဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , Desulfurization ကောက်ခံရေး , filter စာနယ်ဇင်း , ဖုန်မှုန့် Extraction စနစ် , ဖုန်မှုန့် Filter ကို Bag